ပုဇွန်အစိမ်းသုပ် အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်စားချင်သူများအတွက် – Trend.com.mm
Posted on March 22, 2018 June 21, 2019 by Wint
ပုဇွန်အစိမ်းသုပ် ရှူးရှူးရှဲရှဲလေး အိမ်မှာကိုယ့်ဘာသာလုပ်စားချင်သူများအတွက် လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ လွယ်တယ်နော့ …ဆိုင်မှာ တကူးတကသွားဝယ်စားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့…
– ပင်စိမ်း နဲ့ သံပုရာသီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပုဇွန်ကို လုပ်ရင် အခွံချွတ် ၊ ခေါင်းဖြုတ် အလည်ကို ဓားနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးခွဲပြီးရင် ချေးကြောင်းကိုထုတ်ပါ။
အားလုံးကို အခွံချွတ် ၊ နှစ်ခြမ်းခွဲပြီးသွားဆိုရင် ပုဇွန်တွေကို ရှာလကာရည်နဲ့စိမ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ အအေးခံပေးဖို့လိုပါတယ်။ အသားစိမ်းနံ နံ့တာမကြိုက်ရင် ရှာလကာရည်နဲ့ကြာကြာစိမ်ထားပေးပေါ့။
ပါဝင်ပစ္စည်းထဲမှာ ပုဇွန်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို ကြိတ်စရာရှိ ကြိတ်၊ ထောင်းစရာရှိထောင်းပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရသာကို အပေါ့၊ ငန်ရောစပ်ပါမယ်။
အသားစိမ်းနံ့ပြေသလောက်ရှိနေပြီဆိုရင် ပုဇွန်ကို ခုနက ထုထောင်းကြိတ်မွှထားတဲ့အရောတွေနဲ့ သုပ်နယ်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။ ရှလွတ် … ရှလွတ်… ဂလု! ဖတ်ရင်းသရည်တွေကျနေပြီလား? xD အိမ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်စားရင် နည်းနည်းတော့အလုပ်ရှုပ်ပေမယ့် များများစားရတယ်လေ။ အားလုံးအဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းလေးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်…
ပုဇှနျအစိမျးသုပျ ရှူးရှူးရှဲရှဲလေး အိမျမှာကိုယျ့ဘာသာလုပျစားခငျြသူမြားအတှကျ လှယျကူတဲ့နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။ လှယျတယျနော့ …ဆိုငျမှာ တကူးတကသှားဝယျစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့…
– ပငျစိမျး နဲ့ သံပုရာသီးတို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ပုဇှနျကို လုပျရငျ အခှံခြှတျ ၊ ခေါငျးဖွုတျ အလညျကို ဓားနဲ့ဖွညျးဖွညျးလေးခှဲပွီးရငျ ခြေးကွောငျးကိုထုတျပါ။ အားလုံးကို အခှံခြှတျ ၊ နှဈခွမျးခှဲပွီးသှားဆိုရငျ ပုဇှနျတှကေို ရှာလကာရညျနဲ့စိမျပါ။ ရခေဲသတ်ေတာထဲ အအေးခံပေးဖို့လိုပါတယျ။ အသားစိမျးနံ နံ့တာမကွိုကျရငျ ရှာလကာရညျနဲ့ကွာကွာစိမျထားပေးပါ။
ပါဝငျပစ်စညျးထဲမှာ ပုဇှနျကလှဲလို့ ကနျြတဲ့ပစ်စညျးတှအေားလုံးကို ကွိတျစရာရှိ ကွိတျ၊ ထောငျးစရာရှိထောငျးပွီး ကိုယျလိုခငျြတဲ့အရသာကို အပေါ့၊ ငနျရောစပျပါမယျ။ အသားစိမျးနံ့ပွသေလောကျရှိနပွေီဆိုရငျ ပုဇှနျကို ခုနက ထုထောငျးကွိတျမှထားတဲ့အရောတှနေဲ့ သုပျနယျပွီး စားသုံးနိုငျပါပွီ။ ရှလှတျ … ရှလှတျ… ဂလု! ဖတျရငျးသရညျတှကေနြပွေီလား? xD အိမျမှာ ကိုယျ့ဘာသာလုပျစားရငျ
နညျးနညျးတော့အလုပျရှုပျပမေယျ့ မြားမြားစားရတယျလေ။ အားလုံးအဆငျပွစေမေယျ့ နညျးလမျးလေးဖွဈမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ…
စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒီအလုပ်ကိုင်လေးကလည်း သင့်အတွက်မဆိုးလှ…